दिनदहाडै कसले चोर्यो मेरी बास्सैका दाह्री बाको लाखौँ रुपैयाँ बोकेको झोला ? पुगे प्रहरीकोमा – Gazabkonews
दिनदहाडै कसले चोर्यो मेरी बास्सैका दाह्री बाको लाखौँ रुपैयाँ बोकेको झोला ? पुगे प्रहरीकोमा
सम्मानित कलाकार श्रेष्ठ बेलायतमा दुई दशक देखि समाज र कलाकारितामा सक्रिय रहँदै आएका छन् । कोभिडको समयमा राहत बितरण गरेर करिव करिव ४०० परिवार लाई राहत उपलब्ध गराएका उनले आफ्नो यो कमदलाई भोलीका दिनमा पनि निरन्तरता दिने बताए ।
श्रेष्ठले यो सम्मानको श्रेय आँफुलाई मात्र नदिएर सम्पुर्ण टिमलाई सर्मपर्ण गर्न चाहेको बताए । उनले अहिले नेपालमा महामारी तिब्र गतिमा फैलिएका कारण सबैले आफ्नो जन्मभूमि नेपालमा नजर पुर्याउन आवश्यक रहेको समेत औँल्याए ।
उनले नेपालमा महामारी दिनानुदिन फैलिँदै गएका कारण देशविदेशबाट सबैले राहात तथा स्वास्थ्य सामाग्री प्रदानमा आफ्ना कदम अगाडी बढाउनाले महामारी नियन्त्रणमा आउने आशा ब्यक्त गरे । कार्यक्रम साउथईष्ट लन्डन मगर सघं इकाईका अध्यक्ष ,
एवं जमघट परिवार युकेका अध्यक्ष तिर्थ कुमार थापा को प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भएको थियो । ग्लोबल इनासको महासचिव समेत रहेका कलाकार एवंम सामाजिक अभियन्ता श्रेष्ठ बेलायतमा रहेर पनि कलाकारितामा सक्रिय रहँदै आएका छन् । उनका केही चलचित्र र म्यूजिक भिडियोहरु रिलिजको क्रममा रहेका छन् ।